नेकपाको एकतामा देखिएको अनेकता - Jhilko
विचार, दर्शन र सिद्धान्तको आलोक एकातिर पञ्छाएर गरिएको नेकपाको एकता यतिखेर अप्ठ्यारो घुम्तीमा आइपुगेको छ । पूर्व एमालेले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र पूर्व माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेको २१ औं शताब्दीको जनवादलाई समायोजन गरेर जनताको जनवाद नयाँ कार्यदिशा संश्लेषण गरिएको छ । ढिलै भए पनि पार्टीको हितका लागि यो कदम सकारात्मक हो । तर पूर्व कार्यदिशाको धङ्धङ्गीले नेकपाको कार्यदिशा सङ्लिन भने सकेको छैन । सांगठानिक एकता पहिले गरेर विचारको एकरुपता पछि ल्याउन खोज्दा देखिएको अन्योल हटाउन सक्दामात्र यो एकताले पूर्णता पाउनेछ । अन्यथा, गन्तव्यको मृगतृष्णाले यो पार्टीलाई सताइरहनेछ ।
नेपालको भू–राजनैतिक विशिष्टता र संक्रमणकालीन नयाँ राज्यव्यवस्थाको संस्थागत विकास र नयाँ संरचनाको प्रशासनिक कुशलताका निम्ति साझा न्यूनतम राष्ट्रिय राजनैतिक कार्यक्रमको आधारमा नयाँ कार्यदिशा बन्नु अनौठो होइन । देशीय राजनैतिक परिस्थिति र भूराजनीतिक विशिष्टताले सबै बाम धुरीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने वा कम से कम नजिक ल्याउने आधारको सैद्धान्तिक प्रस्तावना आजको मुख्य कार्यभार हो । यसै आधारमा नयाँ कार्यदिशा जनताको जनवादमा कसी लाग्नेछ । खरो उत्रने हो वा होइन, त्यसको परख हुनेछ ।
१२ बुँदेदेखि गणतन्त्रसम्म
पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई ०६२ मंसीर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीले निर्देशित गर्छ । यो समझदारीको प्रस्तावनादेखि बाँकी बुँदाहरुको कार्यभार सम्पन्न गर्ने दायित्व नै आजको कार्यदिशाको मर्म हो । यसमा बाम–प्रगतिशीलहरुको मोर्चावन्दीको आवश्यकता छ । यसमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको सांगठनिक एकताले मञ्च दिएको छ । यो एकताको विग्रहमा अहिलेसम्मको कार्यभार पूरा हुने कुनै छेकछन्द देखिन्न । यसर्थ, एउटा भीषण राजनैतिक बहसपछि बन्ने कार्यदिशा नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावी मार्गचित्र हुनेछ ।
नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी हो होइन ? यो नेपथ्यमा गरिने छलफलको विषय हो । तर, नेकपाले अहिले स्थापित संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र राष्ट्रियताको सवाललाई कसरी सम्पन्न गर्छ भन्ने प्रश्न मुखैमा आएको विषय हो । यही विषयमा नेकपाले विषयान्तर ग¥यो भने पश्चगमनको खतरा लिकमा चढ्नेछ । नेकपाले एउटा खुट्टा राम्रोसँग नटेक्दै अर्को खुट्टो उचाल्ने हतारो गर्दा इतिहासका पाङ्ग्राहरु पछाडि फर्कन सक्ने जमिन पनि त्यत्तिकै मलिलो छ । यद्यपि, एउटा पनि खुट्टो नउचाल्ने हो भने मुद्दाहरु थाती रहनेछन्– अर्को महत्व यसैमा छ । नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको चुरो यसैमा निर्भर छ । तर, यति भन्दैमा नेकपालाई छुट भने हुने छैन । उल्लेखित साझा न्यूनतम कार्यक्रम सम्पन्न गर्न भगिरथ प्रयास गर्नु इतिहासले उसलाई दिएको न्यूनतमभन्दा न्युनतम जिम्मेवारी हो ।
दर्शन अनुसारको ‘भर्सन’
दुनियाँलाई हेर्ने र बुझ्ने दुई वटा विश्वदृष्टिकोण छन् । एउटा विश्वदृष्टिकोण लोकतन्त्रवादी, उदारवादी वा प्रजातन्त्रवादीको नामले चिनिन्छ । अर्को विश्वदृष्टिकोण साम्यवादी विश्वदृष्टिकोण हो । दुबै विश्वदृष्टिकोणका आधारमा राज्यहरुको निर्माण, समृद्धि र विकास भएको विश्वमा थुप्रै उदाहरणहरु छन् । तर यी दुबै विश्वदृष्टिकोणका अनुयायी दलहरुले दर्शन अनुसारको ‘भर्सन’ कायम गर्नुपर्छ ।
चीनमा डा. सनयात सेनले नेतृत्व गरेको कोमिन्ताङ पार्टीले खेलेको देशभक्तिपूर्ण भूमिकाको आज पनि चीनमा उच्च मूल्याङ्कन गरिन्छ । चीनको नवनिर्माणमा कोमिन्ताङ पार्टीको तत्कालीन योगदानको चर्चा गरिन्छ । यसका अतिरिक्त अनेकौं देशका बुर्जुवा पार्टीले खेलेको भूमिका ती देशका हकमा स¥हानीय छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि वीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले सामन्तवादका विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा खेलेको भूमिका स्मरणीय छ ।
कम्युनिस्टलाई छुट छैन
तर, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनपक्षीय काम गर्नबाहेक अन्य छुट छँदै छैन; जसरी सनयात सेनपछि च्याङ काइ सेक नेतृत्वको कोमिन्ताङ पार्टीलाई चीनमा जनविरोधी काम गर्न छुट भयो । दक्षिणपन्थी बुर्जुवा पार्टी र बामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा यही भिन्नता छ । बुर्जुवा पार्टीहरुलाई जनपक्षीय र जनविरोधी दुबै काम गर्न छुट भएझैं कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरुलाई हुन्न । यदि उनीहरुले साम्यवादी दर्शन अनुसारको ‘भर्सन’ लागू गरेनन् भने तिनको पतन हुन आइतबार लाग्ने छैन । पूर्वी युरोप, सोभियतसंघ झैं एकै झोक्कामा तासका घर झैं ढल्नेछन् । सत्ता गएको पत्तो पनि हुने छैन, सपनाजस्तो लाग्नेछ । भारतको पश्चिम बंगाल र त्रिपुरालाई हेरेर पनि शिक्षा र दीक्षा दुबै लिन सकिन्छ ।
पहिलो पटक व्याउन लागेको कोरली गाईलाई लागेको व्यथाजस्तै नेकपामा यतिखेर वैचारिक व्यथाले घर गरेको छ । दुई तिहाई नजिकको मतादेश र संसदमा दुई तिहाईकै मतादेश बोकेर पनि सरकार कुहिरोको कागझैं बनेको छ । सरकारका सल्लाहकारको प्लाटुन खडा छन् । तर तिनीहरु ‘छौंडाछौंडी’को राजनैतिक बहसमा हेलिएर रामरमिता देखाइरहेका छन् ।
सरकारले अगाडि सारेका विधेयकरुपी क्षेप्यास्त्रहरु निष्क्रियमात्र भएका छैनन्, एकाएक हावामा कावा खाइरहेका छन् । आमकार्यकर्तालाई भिरमौरी, मौरी, कमिलाको उपमा दिँदा पनि तिनीहरु काममा फर्किन सकेका होइनन् । सरकार यति रक्षात्मक भइसकेको छ कि, प्रतिरक्षा ‘राम भरोसे’मा पुगेको छ । स्व. रुपचन्द्र विष्टको भनाइ सापटी लिने हो भने, सबै पञ्च एक्लाएक्लै जस्तो देखिएका छन् । आफ्नो प्रतिरक्षा भए साम्यवाद यही हो भन्ने स्थितिमा सबै छन् ।
अहिले पनि जनान्दोलन र जनादेशको पूर्ण सम्मान हुन सकेको छैन । जनादेशको सम्मान नहुँदा सरकारको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएको हो । विचारको आधारमा प्रतिरक्षा हुन्छ । विचार निर्माण भएर बाहिर बहसमा आइसकेको छैन । संगठन दुई पार्टीको भग्नावशेषमाथि बनाइएको छ । सांगठनिक क्रियाकलापमा सत्ताको संरचना छैन । संविधानको संशोधन, परिमार्जन, शासकीय स्वरुप, संघ र प्रदेशको अन्तरविरोध लगायतका मुद्दा काँचोकचिलो छ । समग्रमा सत्ता सञ्चालनको दलीय संयन्त्रसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । हर्फनमौलाझैं जे पनि गर्न उद्यत हुने तर बक्स अफिसमा असफल हुने परिदृश्य छ ।
यस्तो लाग्छ सरकारका क्रियाकलाप आफै प्रतिगमनको पृष्ठभूमिका लागि मलिलो जमिन हो । गुठी विधेयकदेखि तरकारीमा विषादी प्रकरणसम्म, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिदेखि बीआरआईसम्म सरकारको पारदर्शिताको अभाव घाँटीमा अड्किएको छ । विगतका जनान्दोलन र जनादेशको सम्मानको अभाव, आगतको समाजवादोन्मुख समानतामा आधारित विकास र समृद्धि, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अन्तर्विरोधको अन्त्य गर्ने आँखीझ्याल नखोल्ने हो भने ‘रामराम’ भन्ने तर काँध थाप्ने परिस्थिति पार्टी पङ्क्तिमा पनि आउन नसक्ला ।–समयबद्ध साप्ताहिकबाट
शिक्षक नै घुस्याहा भएपछि विद्यार्थीलाई के शिक्षा देलान्...
पक्राउ पर्नेमा पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–३ स्थित सिद्धार्थ माविका अध्यक्ष केदार गिरी...
प्रदेश २ सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय राजपालाई चुनौती
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आगामी असोज ३ गते कालो दिनको रुपमा मनाउने निर्णय...
आइतबार पूर्व प्रधामन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड भिन्नै भूमिकामा देखा परे